प्रिन्स एकलमा जित निकाल्दै सेमिमा – KhabarPurwanchal
खबर पूर्वाञ्चल, २४ पुष २०७६, बिहीबार २०:२१
काठमाण्डौं / ब्याडमिन्टनका उदियमान खेलाडी प्रिन्स दाहाल काठमाण्डौमा जारी प्रेसिडेन्ट कप नेपाल ईन्टरनेशनल सिरिज २०२० मा पुरुष एकल तर्फ अन्तिम चारमा स्थान बनाउन सफल भएका छन् ।
प्रिन्सले भारतका खेलाडी आयन रसिदलाई २१–१०, २१–९ ले पराजित गर्दै अन्तिम चारमा स्थान बनाउन सफल भएका हुन् । तर उनी मिक्स डबल्समा भने पराजित हुन पुगे । रसिला महर्जनलाई जोडी बनाएका प्रिन्स भारतका आयन रसिद र तस्निम मिर संग २४–२६, २१–१४ र २१–८ ले पराजित हुन पुगे ।
मिक्स डबल्स तर्फ नेपालका पेम्बा शेर्पा र सिमा राजबंशीको जोडीले अमृत चौधरी र बिष्णा बिष्टको जोडीलाई २१–१४, २१–१० को सेटमा पराजित गर्दै सेमिफाईनल प्रवेश गरे भने जे.बी. साउद र प्रसुना खत्रीको जोडी भारतका मुरुगप्पा के.एस. र सनिया सिकन्दरको जोडी संग २१–२, २१–७ ले पराजित हुन पुगे ।